पोखरा पुगेर खुलेकी ‘धमला पत्नी एलिजा’, हेरौं तस्बिरहरु – ramechhapkhabar.com
चर्चित पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी हुन् । धमला दम्पती आफैले निर्माण गरेको उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा भने भयो ।
एलिजालाई सानैदेखि पढाइमा भन्दा पनि नाच्न र गाउनमा बढी सोख थियो । पढाइमा भने उनले कहिल्यै त्यत्ति राम्रो अंक ल्याउन सकिनन् । घरमा उनले जितेका पुरस्कार र मेडलहरू अनगिन्ती छन्, तर त्यसमा पढाइको तर्फबाट पाएको भने एउटै छैनन् । सबै नाचगानको मात्र हुन् ।
केटा साथी बनाउनसमेत डर लाग्ने परिवारमा ‘हिरोइन बन्छु’ भनेर भन्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हान्नुजस्तै लाग्थ्यो एलिजालाई । बुबाआमाले भनेको कुरा जे पनि मानिहाल्ने छवि भएको कारण पनि उनले आफ्ना रंगीन सपनाबारे बुबाआमालाई भन्ने आँट गर्न सकिनन् । तर सपना देख्न भने छोडिनन् उनले ।
एक चियापान कार्यक्रममा उनकी आमाले एलिजालाई पनि सँगै लिएर गइन् । एलिजालाई थाहा थिएन त्यो भेटले उनको जीवन नै परिवर्र्तन हुँदै छ भनेर । अक्सर जिन्दगीमा केही सामान्य घटनाले पनि जीवनलाई पूर्णरूपमा मोडिदिन्छन् । सोही कार्यक्रममा एलिजाको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो ।
उनलाई पत्रकार ऋषि धमलासँग भेट गराइदिइन् । सायद एलिजाको विवाहको कुरा मिलाउन नै तयार गरिएको भेट थियो त्यो । त्यो भेटको एक हप्तामै उनको पत्रकार धमलासँग इन्गेजमेन्ट भयो ।
उनले एसएलसी दिनेबित्तिकै त्यो १८ वर्षको कलिलो उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा कस्सिएर लागेकी छन् । फिल्ममा जम्न नसकेपनि म्युजिक भिडियामा भने निकै ब्यस्न बनेकी छन् ।
भने, सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय बनेकी छन् । पछिल्लो समय पनि उनी पोखरा पुगेर पहेलो ड्रेसमा सजिएर फोटोशुट गरेकी छन् । जहाँ उनी निकै खुलेकी छन् भने निकै सुन्दर पनि देखिएकी छन् । उनका ती तस्बिर भाइरल नै बनेका छन् ।
सन्तान जन्माएपछी पनि आफ्नो फ़िटनेसमा ध्यान राख्दै अभिनय र समाजसेवाको यात्रामा निरन्तर पाईला चाल्ने नारीको रुपमा उनको चर्चा हुने गर्दछ ।
दुखद खबर: मलेसियाबाट एकैदिन यति धेरै नेपालीको शव र अस्तु ल्याइयो !
काठमाडौं, २ असोज । मलेसियाबाट एकैदिन ६ जना नेपालीको शव र १५ जनाको अस्तु...
मलेसियामा नेपाली कामदार किन कम्पनी छाडेर भाग्दै छन ?
यसकारण कतारले नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना नलिने
हार्दिक श्रद्धाञ्जली !! मलेसियामा अस्ताए २७ वर्षिय आले
दुखद खबर : मलेसियामा एकै कम्पनीमा काम गर्ने दुईजना नेपालीको मृत्यु !! हार्दिक श्रद्धाञ्जली